Actorylọ ọrụ Nkwado Elbow - ndị na - eme China Elbow na - akwado ndị na - emepụta ihe, ndị na - eweta ihe
Aka uwe UV
Aka uwe a nwere ike ọ bụghị naanị chebe aka gị, kamakwa ọ na-ewetara gị njin. Site na nnwale ọkachamara, ọ nwere nchebe UV dị irè. You nwere ike na-emega ahụ na ìhè anyanwụ dị ike na-enweghị mgbakasị ahụ gbasara ahụ gị. Usoro ntinye dị larịị ma dị larịị na-eme ka uwe a dị larịị ma nwee nnukwu ume, agagharị na-enweghị agagagharị. Yiri uwe na-enweghị mkpọda, uwe aka agaghị amị amị.
Mpempe onwe hexagonal nọọrọ onwe ya, na-agbada ma gbasasịa mmetụta nke ike mpụga n'oge mmega ahụ. Ọ bụ mpempe kachasị ọhụrụ nwere akwa mgbakwunye mmanụ acomụ siri ike maka nchebe karịa na egwuregwu. Microrọ microfiber na-enweghị atụ, ọsụsọ na-eme ngwa-ngwa iji mee ka anụ gị ghara inwe ntụsara ahụ. Mpempe mgbochi mgbochi nke wavy nwere ike igbochi ogwe aka na-agbadata n'oge mmegharị ahụ.
Akwa akwa breathable akwa na-amịcha ọsụsọ na -eme ka ogwe aka gị na -akwụ na free, mgbako gụsịrị akwụkwọ na-eme ka mgbasa maka mgbake ngwa ngwa, ezigbo nkwado maka ntinye akwara. Ngwakọta nka na uzu pụrụ iche dabara na nkwonkwo dị iche iche. Ihe nkedo a na -emeghe aka aka siri ike ma na –emekwa ike, nke na-egbochi ogwe aka ka osidata ogwe aka gị Nchedo zuru oke na-eme ka mgbu ghara igbagide.